दर्पणको अगाडि यस्तो तस्वीर अवलोकन गर्नु आवश्यक छ कति पटक: एक थकित नजर, एक छाती छाला, आँखाको छेउमा काँध ... आँसुको मुटुमा चोट लगाउने कारण धेरै फरक हुन सक्छ। धेरै स्वस्थ व्यक्तिहरूमा, घर्षणको मुख्य कारण थकान र निद्राको कमी छ। साथै लामो समयपछि स्वादहरू देखा पर्न सक्छ। तर कहिलेकाँही आँखामा चोट लागेको छ कुनै पनि रोगको संकेत हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एक अँध्यारो, भूरी रंग, आँखा भित्रका सर्कलहरू जिगरको काममा हृदय र विभिन्न असामान्यताहरूसँग समस्याहरूको बारेमा बस्छन्। डार्क बैजनी सर्कल प्रायः ती व्यक्तिहरूमा दबाब दिन्छन् जुन समस्या र गुर्दे संग समस्या छ। यसबाहेक, आँखामा नाजुक छाला आँख गुफामा छ र एक निस्वार्थ रात पछि मांसपेशिहरु अनुहार कमजोर, त्यसैले गुफाहरू गहिराइ र तीव्र हुन्छन्। बच्चाको आँखामा बिरुद्ध न केवल निर्दिष्ट कारणहरूको लागि मात्र देखिन सक्छ, तर पनि विरासतको कारणले पनि। यदि एक रिश्तेदार मध्ये एक आँखामा पतली छाला छ भने, आँखामा चोटको सम्भावना धेरै बढ्छ। के म कसैको हातमा थोरै छुट्याउन सक्छु? तपाईं, यदि तपाईं आँखाको अन्तर्गत चोटको उपस्थितिको कारण जान सक्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। किनकि उनीहरूलाई अलविदा भन्न एक पटक र सबैका लागि, तपाईले आँखाको तर्फबाट चोटको प्रतीक को कारण धेरै छुटकारा पाउन आवश्यक छ।
सुरू गर्न, सबै अंगहरूका परीक्षामार्फत यो सुनिश्चित गर्न को लागी किरणको प्रतीकले रोगहरूको कारण होइन। यदि मस्तिष्क रोगको परिणामको रूपमा देखा पर्यो भने, तपाईंले रोगग्रस्त अंगको व्यवस्थित उपचार चाहिन्छ। यदि आँखाको छेउमा पर्ने कारणहरूले रोगहरूमा छैनन् भने, तपाइँ निम्न नियमहरू पालन गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:
1. पूर्ण निद्रा चूंकि अपर्याप्त नींदको कारण स्वाद अक्सर देखिन्छ, दिनदिनै कम्तीमा आठ घण्टा सुत्न प्रयास गर्नुहोस्। यसले ऊर्जाको क्षति भर्न मद्दत गर्नेछ र चोट पुर्याउन मौका दिनेछैन;
2. अत्यधिक भारको अनुपस्थिति। तपाइँसँग कडा मेहनत भए तापनि, तपाईंको शरीर ओवरलोड गर्न प्रयास नगर्नुहोस्। सबै पछि, कुनै काम स्वास्थ्यको लायक छैन। यदि तपाईंको काम कम्प्युटरसँग जोडिएको छ वा आँखाको तनाव चाहिन्छ भने काममा सानो ब्रेक लिन प्रयास गर्नुहोस् ताकि तपाईका आँखाहरू आराम गर्न सक्दछ। यसको लागि तपाईं एक ब्रेकमा भिजुअल जिमनास्टिक्स लिन सक्नुहुनेछ (दूरीमा हेर्नुहोस्, त्यसपछि विषय धेरै मिनेटका लागि बन्द गर्नुहोस्);
3. रातको लागि धेरै पिउन नदिनुहोस्। शाम को समयमा अत्यधिक तरल पदार्थ सेवन आँखों को तहत कचरे बनाउन मा मदद गर्दछ, यसैले बिस्तर देखि पहिले धेरै पीना मत;
आँखाको वरिपरि अनुहारको हेरविचार गर्नुहोस्। हरेक बिहान, आँखाको वरिपरि अनुहारको मालिश। औंलाहरु को लाइट टेपिंग आंदोलनहरु संग, अस्थायी भाग देखि शुरू, आँखा को आसपास छाला को ट्याप गर्नुहोस, नाक को पुल मा जान्छ। त्यसपछि आँखाको वरिपरि छालाका लागि विशेष क्रीम वा जेलको आँखामा छाला क्षेत्र लागू गर्नुहोस्। रक्त समाप्ति को सुधार र अतिरिक्त तरल को बहिष्कार को बढावा देने वाला पदार्थहरुमा एक उत्पाद को उपयोग गर्नुहोस;
5. आँखामा पहिले नै अवस्थित विघटनको मुखौटा गर्न, एक न्यानो नारंगी छायाका लागि एक विशेष स्याहार प्रयोग गर्नुहोस्, यसले आँखाको छालाका दोषहरू लुकाउँछ, र हेरचाह गर्ने पदार्थहरूले यसलाई नाजुक र नाजुक छाला पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। बस बच्चाहरु को आँखा को तहत चोटहरु मुखौटा मत, कस्मेटिक उत्पादनहरु एलर्जी उत्तेजित गर्न सक्छन्।
यी सरल सुझावहरूले आँखामा चोटको उपस्थितिलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ। परम्परागत औषधि पनि यस मामिलामा मद्दत गर्न सक्छ। प्रभावकारी छन् कालो चाय, छातीमा बनाइएको कम्प्रेसर। एक राम्रो सुअवसर एजेन्ट अशुद्ध छ। तपाईं एक मुखौटा बनाउन सक्नुहुन्छ: अजवालीको एक चम्मच एक गिलासको तातो पानी ब्रेक गर्न, पन्द्रह मिनेट र तनावको लागि जोर दिए। लोशन बनाउनुहोस्, यसलाई पिक्सेलमा राख्नुहोस् र दस मिनेटको लागि राख्नुहोस्।
कष्ट संग लड र सुन्दर हुनुहोस्!
एक अजिङ्गर को टाटु। ड्रेगन को प्रकार (फोटो)
टाटु संस्कृति: एक बिच्छी टाटु को मूल्य
हूवर Bork: विनिर्देशों, समीक्षा
Galina Stakhanov: जीवनी, रचनात्मकता, परिवार
को "प्रोत्साहन" मा विनिमय गर्न लिङ्क कहाँ छ? जवान व्यापारी मद्दत
इन्टरनेटमा साइट कसरी प्रकाशित गर्न?
Pies लागि आँटा